Dastuurka Cusub Ee Somalia - Akhri Qodoba Muhiim Ah - iftineducation.com
iftineducation.com – CUTUBKA 1AAD – (BAAQA JAMHUURIYADDA)
Dastuurka Soomaaliya waxaa saldhig u ah Quraanka kariimka ah iyo Sunnada Nabi Muxammed (scw), wuxuuna hormarinayaa maqaasidda shareecada iyo cadaaladda bulshada.
Soomaaliya waa dal Islaam ah, dadkiisuna ku abtirsadaan dunida Carabta iyo Afrikaanka.
Haweenku waa in ay ka mid noqdaan dhammaan hay’adaha guud ee qaranka, gaar ahaan jagooyinka laysu doorto iyo kuwa laysu magacaabo ee saddexda laamood ee dowladda iyo Guddiyada madaxabannaan ee Qaranka.
Islaamku waa Diinta Dowladda.
Lama soo saari karo sharci aan waafaqsanayn Mabaadi’da Guud ee Shareecada Islaamka iyo Maqaasiddeeda (Ujeeddooyinkeeda).
Dastuurka Soomaaliya oo ku salaysan mabaadii’da shareecada Islaamku waa sharciga dalka ugu sarreeya, isaga ayay xukuumaddu u hoggaansamaysaa, wuxuuna hagayaa siyaasaddaha iyo go’aannada qaybaha xukuumadda oo dhan.
Sida ku xusan Cutubka tobnaad ee Dastuurka, maxkamad ayaa burin karta sharci kasta ama tallaabo maamul oo ka soo horjeedda Dastuurka.
Soomaaliya waa Jamhuuriyad Federaali ah oo gob ah, kuna dhisan matilaad dadweyne loo dhan yahay oo dimoqraaddi ah.
Shacbiga Soomaaliya waa hal, lamana kala qaybin karo.
Gobannimada Jamhuuriyadda Soomaaliya waa muqaddas laguma-xadgudbaan ah.
Calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya, sida lagu muujiyay qaybta A ee jadwalka koowaad, waalaydi buluug furan ah oo dhexda kaga taal xiddig cad oo shangees ah, madaxyo simanna leh.
3Sharci gaar ah ayaa laga soo saarayaa Heesta Qaranka.
Sharci gaar ah ayaa laga soo saarayaa billadaha sharafta.
Dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya waa laguma xad-gudbaan lamana qaybin karo.
Guddoon afri Qarameed oo keliya ayaa lagu oggolaan karaa waxkabeddelidda dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya.
Muqdisho oo loo yaqaanno Xamar waa Magaalo Madaxda Jamhuuriyadda Soomaaliya. Maqaamkma Magaalo madaxdu ay ku leedahay qaabdhismeedka federaalka ee Jamhuuriyadda wuxuu ku xusan yahay Cutubka 7-aad ee Dastuurka.
Hadaba Qodobada Dadka Soomaalida ah ay isku mari la’yihiin waxaa kamid ah in Haweenka ay ka qeyb galaan dhamaan Xilalka siyaasadeed kuwooda ugu sareeya, Waxaase ogaataan in culumada xitaa ay ku kala aragti duwan yihiin.
Qodobada kale ee halkan laga qaadan karo waxaa kamid ah in waxii qaldama loo celinayo maxkamada dastuurigga ah, aaway Shareecadii islaamka?
Waxaa kale oo ku jira in dastuurkan oo ku salaysan shareecadda islaamka aan laga hor imaan karin, maxaa loo dhi waayay in shareecadda islaamka aan laga hor imaan wax kasta oo dhaca?
Qodobada kale Waxaa kamid ah in Luuqada Soomaaliga ah ay tahay tan dalka waxaana ay ukala baxdaa May iyo Maxaa tiri? Aaway Lahjadihii kale ee dadka Soomaalida ah ku hadlaan sida dadka dega marka iyo qeybo kale oo Soomaalia ah.?
Fikirkaada Halkan kusoo Gudbi Insha Alllah
Beri la soco Cutubka Labaad ee Dastuurka qabyada ah
Daawo Shilkii Ugu Xumaa ee aduunka soo mara “Hadaadan Awoodin Hadaawan””